Windguru Tarifa - Ikuku dị n'aka gị | Netwọk Mgbasa Ozi
Windguru Tarifa, kedu ihe ọ bụ na otu esi akpọ ya?
Enwere ọtụtụ peeji ebe ị nwere ike ịlele amụma ihu igwe, mana ọ bụghị ha niile bụ maka ndị hụrụ egwuregwu egwuregwu a na-eme n'oké osimiri, dịka ọ dị Windguru. Peeji a dị mfe iji, dị oke nghọta, ya mere ọ bara ezigbo uru mgbe ịchọrọ ịlele amụma maka ụbọchị ole na ole sochirinụ maka otu ebe.
Ma na mgbakwunye na ịnwe ike ịlele ọsọ na ntụziaka nke ifufe, ị nwekwara ike ịhụ okpomọkụ, ihe gbasara nke ọdịda, na ọtụtụ, ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Gụọ na ịchọta otu esi enweta ọtụtụ weebụ, yana Otu esi lelee amụma Windguru Tarifa.
1 Gịnị bụ Windguru?
1.1 Amụma amụma
2 Weather amụma Tarifa (Windguru Tarifa)
Gịnị bụ Windguru?
Image - Nseta ihuenyo
Ọ bụ ọrụ pụrụ iche maka amụma ihu igwe maka ndị hụrụ egwuregwu ndị a na-eme n'oké osimiri, dị ka ikuku ikuku, ọ bụ ezie na m kwuru, iji ya eme ihe kensinammuo, yabụ enwere ike ịjụ onye ọ bụla.
Ọ naghị egosi amụma ndị gọọmentị, ebe ọ bụ na ebum n'uche ya iji nyere ndị mmadụ aka n'ozuzu ha, na ịkọ amụma nke ọma etu ihu igwe ga-adị bụ ọrụ ka dị mgbagwoju anya taa. Mana eziokwu na ọ bụghị gọọmentị apụtaghị na ọ bụ ibe, ka anyị kwuo, dara ogbenye ma ọ bụ nke adịghị mma, kama nke ahụ: N'ime ya ị ga-achọta ọtụtụ ozi nwere ike ịba uru, dị ka amụma tide, amụma amụma, ebili mmiri, ha nwere ọgbakọ ebe ị nwere ike ịkpọtụrụ obi abụọ niile. na i nwere.
E nwere nsụgharị abụọ: otu free site na nke ị nwere ike ịhụ data ihu igwe, na nke ọzọ ugwo, ekele nke ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ weebụ karịa, ebe ọ bụ na agaghịzi egosipụta ọkọlọtọ mgbasa ozi, ị ga-ahụ amụma amụma ka emelitere. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịdenye aha, ị ga-ebu ụzọ debanye aha site na ịpị 'Register' na sidebar (n'aka ekpe) wee megharịa ndenye aha gị na Windguru PRO, bụ ndị ọnụahịa ha bụ
Otu afọ: euro 19,90
Afọ abụọ: euro 34,90
Otu ọnwa: euro 2,90
Ozugbo anyị nwetara web, anyị ga-enweta onyogho yiri nke a. N'ime ya anyị na-ahụ tebụl amụma, nke egosiri ya na oge mbido ihe nlereanya na UTC (enwere ike ịhụ ya n'akụkụ aka ekpe elu); n'ahịrị ikpeazụ ị ga-ahụ nhazi nke ebe, ma ohere na lonjituudu, oge nke ya na ya kwekọrọ, oge ọwụwa na ọdịda anyanwụ, na oké osimiri dị elu.
Na akụkọ ihu igwe ị hụrụ:
GFS nlereanya (Global Forecast System, ma ọ bụ na Spanish Global Prediction System), nke bụ nọmba ihe atụ nke amụma ihu igwe nke National Oceanic na Atmospheric Administration nke United States (NOAA) kere ma jiri ya.
Ọsọ ikuku 10m si n'elu.
Ọsọ ikuku gbanwetụrụ, nke ahụ bụ, atụmatụ nke ezi ifufe ga-adị na mpaghara ndị kachasị emetụta ụfọdụ ntụ ikuku.
Ntụziaka nke ifufe.
temperatura na 2m n'elu ala, dị ka GTOPO30 si kwuo, nke bụ usoro elekere dijitalụ nke nwere 30 arc sekọnd, na SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), nke bụ radar gbanwere nke mepụtara nkọwapụta topography dị elu zuru oke na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe nile gbara ọkpụrụkpụ n’elu ụwa.
Ahụ ọkụ, nke pụtara ìhè okpomọkụ anyị na-eche dabere na ifufe, iru mmiri na ọnọdụ okpomọkụ.
Ezigbo 0ºC, ma ọ bụ elu ebe okpomọkụ dị ogo 0. A na - ahụ ya naanị ma ọ bụrụ na ihe nlele ahụ na-ahụ okpomọkụ n'okpuru 5ºC.
RH, nke zoro ezo n'aka ndị ọrụ na-edeghị aha.
Ikuku ikuku n'oké osimiri na hPa. Visible debara aha ọrụ.
Igwe ojii mkpuchi, nke ahụ bụ, ọ bụrụ na igwe ojii ahụ dị elu, ọkara ma ọ bụ dị ala.
Ọdịda enyere na millimita.
Ogologo oke ikuku dị mkpa.
Oge ebili na sekọnd.
Ntuziaka nke ebili mmiri.
Ntụle Windguru. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-efe efe, ị ga-ahụ nke a n'anya. Dabere na agba na ọnụ ọgụgụ nke kpakpando, ị ga-ama ma ọ bụrụ na otu ụbọchị dị mma iji wepụta tebụl. Dịka ọmụmaatụ, kpakpando na-acha odo odo pụtara na ụbọchị ahụ dị ezigbo mma, karịsịa ma ọ bụrụ na e nwere 3; N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị hụ kpakpando na-acha anụnụ anụnụ, ọ ga-aka mma ichere ntakịrị, ebe ọ pụtara na ọnọdụ okpomọkụ ga-agbadata na 10ºC ma ọ bụ obere.
N'ikwu okwu banyere ebili mmiri, ọnọdụ okpomọkụ na ndị ọzọ, ị na-eche echiche ịga Tarifa ị ga-achọ ịmata ihe ihu igwe ga-adị?
Weather amụma Tarifa (Windguru Tarifa)
Inyocha amụma ihu igwe maka Tarifa ihe mbụ ị ga - eme bụ, n'ezie, nweta weebụsaịtị Windguru. Mgbe ahụ, ịchọta ya ị ga-:
Pịa menu, nke di na elu aka ekpe, n'okpuru “file» na »tides».
Wee họrọ mpaghara ala (Europe), ndị mba (Spain), na n'ikpeazụ ebe (Ọnụego)
Ozugbo emere nke a, ị ga - enweta Windguru Tarifa:
Na njikere. Yabụ ị maraworị ihe ihu igwe ga-eme na ụbọchị ole na ole sochirinụ. Mfe nri?
You maara ebe nrụọrụ weebụ Windguru?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe » Windguru Tarifa, kedu ihe ọ bụ na otu esi akpọ ya?
Kedu ihe bụ ihu igwe nke gale
CO2LABORA, ngwa iji mụtakwuo banyere mgbanwe ihu igwe